Ogaden News Agency (ONA) – Dibadbaxyo Rabshado Wata oo Kadhacay Gobolka Axmaarada.
Dibadbaxyo Rabshado Wata oo Kadhacay Gobolka Axmaarada.
Posted by Dulmane	/ July 28, 2018
Wararka naga Soo gaadhaya magaalada Gonder ee Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in ay wali halkoodii kasii socdaan dibadbaxyadii rabshadaha watay ee lagaga Soo horjeeday dilkii maareeyihii mashruucii biyo xidheenka wabiga Nile, kaas oo maydkiisa laga helay garoonka dayuuradaha ee magaalada Addis Ababa.
Shacabka kudhaqan guud ahaan Gobolka Axmaarada ayaa bilaabay dibad baxyo waawayn oo ay ku bartilmaameed sanayaan qoomiyada Tigteega taas oo lafilayo in ay kadambeeyaan dilka maareeyaha mashruuca wabiga Abay oo ahaa biyo xidheen aad uwayn oo xukuumada gumaysiga Itoobiya ay kutaamaysay in ay kamidho dhaliso, waana biyo xidheenkii dhulka dhigay xidhiidhkii wadanka Itoobiya iyo Masar oo uu wada maro wabiga Nile.
Shacabka kudhaqan magaalada Gonder oo dhagaxaan iyo budhadh kuhubaysan ayaa lasheegayaa in ay weerareen guryo ay lahaayeen dad kasoo jeeda qoomiyada Tigteega waxaana lasheegayaa in ay ugaysteen khasaare aad ubadan dhismayaashii qoomiyada Tigteega ee magaalada Gonder iyo waliba magaalooyin kale oo Gobolka Axmaarada kamid ah.
Dhinaca kale ciidanka gumaysiga Itoobiya ee magaalada Gonder ayaa lasheegayaa in ay dadkii shacabka ahaa kufureen rasaas nool, waxaana lasoo warinayaa dhimashada hal ruux oo shacab ah iyo waliba dhaawac aad ubadan oo isugu jira kuwo culus iyo kuwo fudud.
Afhayeen uhadlay dadka shacabka ah ee magaalada Gonder ayaa sheegay in ay siiwadi doonaan kacdoonada ay kuxaqiijinayaan nabad galiyadooda isla markaana ay kaga hortagayaan waxa ay kusheegeen weerarka qarsoon ee ay siyaasiyiinta qoomiyada Tigteegu kuhayaan dadka shacabka ah ee udhashay qoomiyada Axmaarada.
Kacdoonada shacabka ee lagaga soo horjeedo dilka Injineerka dhismaha biyo xidheenka, kaas oo labadii bari ee lasoo dhaafay kasocday magaalada Addis Ababa iyo waliba magaalooyinka waawayn ee Gobolka Axmaarada.